Shure MV5C, nyocha miri emi nke igwe okwu | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 22/05/2021 18:00 | General, Nyocha
Igwe okwu na kamera weebụ ndị ọzọ bụ ihe gara aga ugbu a na ọtụtụ ndị ọrụ ahọrọla laptọọpụ nwere ikike ndị a ewuru, yana ịrị elu ekweisi ikuku na-agụnye igwe okwu ka mma. Agbanyeghị, "telecommuting", ịrị elu nke nkwanye na pọdkastị emeela ka anyị gbanwee echiche anyị ntakịrị.
Oge a ka anyị nwere igwe okwu Shure MV5C, igwe okwu dị nro nke ọma na nkwa nke akara amaara ama. Anyị na-enyocha igwe okwu a n'ụzọ miri emi, dị ka mgbe niile, anyị na-agwa gị isi okwu ya kachasị ike yana n'ezie, ọ kachasị ike.
3 Ahụmahụ nchịkọta akụkọ
Oge a Shure ahọrọla maka ihe ha kpọrọ Ụlọ Ụlọ, a igwe okwu na-abụghị kpọmkwem iji ọkachamara ọha ma kama na "niile na-ege ntị." Obi abụọ adịghị ya, ogologo oge a, nsogbu jupụtara na mbugharị mbugharị emeela ka ndị na-emepụta ụdị ngwa a mepụta azịza ọgụgụ isi maka nsogbu ụfọdụ, ihe a ga-anabata. Nke a bụ etu esi mụọ MV5C a, igwe okwu na Officelọ ụlọ na nzukọ ọgbakọ dika otu ika ahu si ekwu. Yabụ, ịnwe mkpịsị hlọk hideous na desktọpụ gị abụghị nhọrọ kacha mma. Shure na-etinye aka na minimalism dị ka anyị pụrụ ịhụ.
Anyị nwere ngwaọrụ 89 x 142 x 97 nwere isi echiche zuru oke na isi ala aluminom nke na-eme ka anyị nwee ike ịhazi usoro nke igwe okwu. Na azụ nke isi gburugburu a bụ ebe anyị ga-ahụ ọdụ njikọ njikọ USB na 3,5mm Jack maka ekweisi. N'aka nke ọzọ, na mpaghara nke elu na-agụ akara ika ahụ na akara ngosi nke ọkwa nke igwe okwu. N'ezie, anyị ga-ekwusi ike na anyị gụnyere eriri USB-A na USB-C na ngwugwu ka anyị ghara inwe nsogbu ndakọrịta.
Anyị nwere ngwaọrụ nwere azịza ya ugboro 20 Hz ruo 20 kHz, nke karịrị igwe okwu ọdịnala nke agụnyere na ndetu. Agbanyeghị, nzaghachi a na-agbanwe agbanwe ma ọ ga-aga aka na a ụda olu nke 130 dB SPL. N'aka nke ọzọ, anyị nwere onye ntụgharị condenser na ụkpụrụ obi obi ama ama, na akara nke ngwaahịa ndị Shure na-emekarị. Anyị enweghị nke ahụ, ụdị ọ bụla nke nzacha dị ala, nakwa dị ka enweghịzi dimkpa na ụdị capsule na-agbanwe agbanwe.
Emebere igwe okwu iji nwee nzaghachi dị larịị, ya bu, tumadi iweli olu. Nhazi ahụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị, na-ejikọ njikọ a ozugbo Shure MV5C Site na ọdụ ụgbọ USB ya na laptọọpụ anyị na Windows ma ọ bụ Mac anyị, isi iyi ọhụụ ga-apụta na Mbugharị ma ọ bụ Otu dị iche iche, nke ahụ ga-abụ igwe okwu Shure. Ọ na-enweghị downloadable software (na anyị na-anwale) ya mere n'oge a Shure ahọrọla nkwụnye na-egwu, nke ezi uche dị na ya ịtụle na nke a lekwasịrị anya na Officelọ Ọrụ .lọ.
Ahụmahụ nchịkọta akụkọ
Anyị eguzola n'ihu igwe okwu nke na-agaghị enye anyị ihe ọ bụla dị iche na narị otu narị puku igwe okwu mpụga n'oge ọ bụla a na-ere ya. Ebumnuche ya bụ ịnye njikọ dị mfe ma dịkwa mfe, ọ bụ ya mere Shure esiwo na nke ndị ọkachamara wepụta ọfụma wee rute ndị na-ege ntị na-enweghị enyemaka ugbu a na igwe okwu MV5C a, nke ndị ọrụ nwere oku site na nyiwe dịka ndị otu Microsoft kwa ụbọchị. Agbanyeghị, na Shure agbakụtalarị n'ọdịnala ọdịnala ha apụtaghị na ha emehieghị.
Agbanyeghị na Shure MV5C anaghị enye anyị ụdị ahụmịhe onye ọrụ dị iche na ndị ọzọ, ọ nwere uru na naanị n'ime usoro abụọ anyị na-akpọ oku ma ọ bụ oku vidiyo ebe ndị ọzọ ga-anụ anyị nke ọma, na-enweghị nnyonye anya ma ọ bụ ụdị ọ bụla mkpọtụ, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Shure na-achọ na nke a MV5C, na-enye nkwa na ịdị jụụ nke nsonaazụ nke akara gị na-enye, na-apụ na ndị na-ege ntị na-achọ mgbagwoju anya na ntụgharị. Ọ bụ ya mere Shure MV5C anyị nwere ike iji kwuo na ọ na-emezu n'ụzọ ziri ezi, ọ bụghị karịa ma ọ bụ obere, na ihe ọ kwere nkwa.
Ajụjụ dị ugbu a bụ ma ọ bara uru ịkwụ ụgwọ euro 105 nke Shure MV5C na-efu, ngwaọrụ nke, dị ka ngwaahịa ndị ọzọ nke ika ahụ, nwere ọnụahịa dịtụ elu karịa asọmpi ahụ. Anyị nwere igwe okwu na-efu ọkara ma ọ bụ karịa na Amazon ma nke ahụ ga-enye anyị nsonaazụ yiri ya, ọ bụ ezie na anyị agaghị enwe nkwa nke Shure, nkwado nke Shure ma ọ bụ n'ezie ụdị nhazi na ihe owuwu dị otú ahụ. Ọzọ, Shure MV5C a bụ mic nke nhọrọ maka Ụlọ Ụlọ na-achọ ihe kacha mma.
Ihe na: Mee 22 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: Mee 22 nke 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Shure MV5C, nyocha miri emi nke igwe okwu na-agbanwe agbanwe